Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus In Europe
oo kaliya dhowr saacadood gudahood, aad la sahaminta kartaa dadkii badnaa ka mid ah dalalka cusub oo dhalaalaya iyo sparkly. laakiin, waxa sida ugu fiican oo ay halkaas ka heli. Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo in Bus Europe markii u safraya?
Si dhakhso ah oo si fiican u raadinaya!
Tareenadu, ka duwan basaska, safarto si toos ah iyada oo loo marayo baadiyaha. Taas macnaheedu waa in halkii taag at jid weyn caajiso, ama saacadaha kharashka fudud meeshaad u dhaqaaqin, aad fursad u leeyihiin inay arki dheeraad ah oo ka mid ah dalka aad dooratay. Marka aad diyaar u yihiin in ay u guuraan u gal aad u socoto ee soo socota, aad halkaas ka heli doontaa in waqti lahayn. Xawaare sare Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus in Europe. Waa no-brainer.
By 'hakadka lahayn', waxaan micnaheedu maahan 'maya garaaca macaan'. Waxaan ula jeedaa ma saxmadda BAABUURTA. Taasi waa wax ku saabsan jidadka tareemada - Ma jiro wax ka xanibeen jidka. Iyagu waa xaq line si toos ah u aad u socoto.
kursi Bus yihiin denser badan kuraasta tareenka
raaxada ee Tareen oo ay kasoo horjeeddo Bus
Marka ay timaado in safarka tareenka oo ay kasoo horjeeddo baska. Raaxada waa boqorka. Marka aad go'aan ka dhexeeya Tareen oo ay kasoo horjeeddo Bus in Europe, Tareenadu ku guuleysto ma aha oo kaliya en wadada laakiin in-u dhexeeya, sidoo kale! At saldhigyada tareenka, aad awoodid sug aad tareenka ee raaxada iyo ammaanka, badan ee meelaha fadhiistaan, ee cun oo cab ama ay iibsadaan waxyaabaha safarka ha u.
On Bus ah, aad wadaagaan meel yar (iyo musqul yar!) la rakaabka kale. ma awoodi doontid inaad si aad u hesho ilaa iyo fidin lugaha ama u guuraan kursi la aamusan, iyo waxaa laga yaabaa in aanay wax cunto ama cabitaan heli karaa.
kuraasta tareenka waa raaxo badan yahay kuraasta baska
on a safarka tareenka, ogeysiisyada ku siin doonaa faahfaahsan up-to-date macluumaad ku saabsan tareenka, ka markii ay ka dhigeysa in meesha ay ka istaago oo oo madal waxaa ka tegey, iyo haddii aad rabto in aad is barbar tareen oo ay kasoo horjeeddo baska on dabacsanaan, ka dibna on tareenka, aad u ogaato in 90% saxnaanta markaad timaado doonaa.
baska A aad ka heli doonaan in ay B, laakiin haddii aad rabto in aad sii socon, aad doonaa dhibaatooyinka qaali. dib u dhac aan la saadaalin karin sababa gaadiidka waddooyinka macnaheedu noqon karaa maqan aad xiriir, aad ujecel badan oo dheeraad ah.
On in Tareenku, you have total flexibility; kaliya kor u soo noqdaan oo ay ku boodaan on hadba tababar, si loo waafajiyo qorshaha aad.
Wax macno ah ma haddii aad seegto tareen - kaliya aad bood kartaa mid ka mid ah ee soo socda!
Ma waxaad ka dhaadhiciyay in ay Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus in Europe weli ka doodista?
Tag on, ballansan safar tareen aad la Save A tareenka. Iyada oo meel kale oo badan saarnaa tareenka, waxaad yeelan doontaa qolka in ay dib u fadhiisan, nasato oo wuxuu ku raaxaysan muuqaal ah halka aad u qorshaysanayso dhaqaaqo soo socda.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-versus-bus/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#bustravel Bus europetravel longtrainjourneys TrainStation talooyin tareenka tareen safarka TrainVSBus traveltips